Maxaa ka dhigaya awood sare?
Meelo badan oo mulkiilayaasha bogga ah ayaa isweydiinaya inta badan taageerada ay u baahan yihiin si ay u abuuraan joogitaan online ah oo ka mid ah domain. Ma jirto jawaab sax ah su'aashan. Siyaabo badan, waa su'aasha khaldan ee lagu waydiiyo marka la falanqeynayo dhabarka dambe ee SEO sababtoo ah dhibaatada oo dhan ee dhismaha xidhiidhka ayaa ka soocaya tayada ku saabsan tirada xariirka soo socda. Qodobkani, waxaanu si dhow u eegaynaa farsamooyinka dib-u-qabsiga iyo in la barto sidii loo heli lahaa dib-u-kicin awood sare ah ee goobtaada - vamo variable wattage mod. Waan ka wada hadli doonnaa sida Google u aragtay, wixii dib u soo celiya casriga ugu sarreeya iyo sida loo hagaajiyo tayada xiriirrada soo socda.
Xiriirinta PageRank iyo backlinks
PageRank waxay u adeegtaa sidii gole-barte Google ee meeleynta bogga bogga natiijada raadinta. Waa mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu muhiimsan ee la tixgeliyey marka la go'aaminayo SERP. Websaydh kaas oo ay soo gudbiyaan domiyo badan oo awood leh ayaa la hubaa in ay sare ugu sii galaan SERP. Mabda'a asaasiga ah ee laga dhigo PageRank waa in isku xirnaanta intarneedkaagu uu ka helo ilo kale, oo aad u muhiim ah in boggu noqdo. Google wuxuu kugula mahad naqayaa tayada xiriirka gudaha iyo hubi sida bogagga loo calaamadeeyay ee ku xiran aaggaaga.
Google wuxuu qiimeeyaa bogagga laga bilaabo eber ilaa toban. Bogagga kuwaas oo leh darajo darajo ah ayaa ah bogagga internetka ee bogga ama bogga aan lahayn tayada tayada leh ama wax ku oolka ah. Websiyo leh darajo PR10 ah ayaa ah kuwa ugu sarreeya ilaha rasmiga ah ee leh sumcad sare iyo heerka ugu sarreeya.
Waxaa xusid mudan in PageRank ma ahan qadar qumman, laakiin waa mid ka sarreeya. Sida laga soo xigtay, bogga PR3 wuxuu noqon doonaa mid aad u qiimo badan oo ka khuseeya bogga PR2. Taasi waa sababta xiriirka ka mid ah bogga uu leeyahay PageRank qiimo ka badan boqol xiriir oo laga helay ilo tayo liita oo leh miisaan PR.
Maxaa ka dhigaya taakulo tayo sare leh?
Shaki kuma jiro, in qadarka ugu weyn ee ganacsatada internetka ay jeclaan lahaayeen in ay si toos ah ula xiriiraan shirkadaha suuqa kala iibsiga sida Wikipedia, Facebook, Amazon ama Moz kuwaas oo haysta PageRank. Dhab ahaantii, ganacsiyada intooda badani sii kordhi ma'aha. Nasiib wanaag, waxaa laga yaabaa inaad dib u heshid bogag internetka dhexdhexaad ah iyo xiriiriyeyaashani waxay sidoo kale kuu keeni doonaan qiimo gaar ah.
Google wuxuu isticmaalaa tirada shuruudo kala duwan marka la qiimeynayo tayada xiriirrada soo socda. Ugu horreyntii, waxay hubinaysaa xiriirka ilaha iyo haddii ay raacdo guud guud ee danaha user. Qiyaas kale ayaa lagu kalsoonaan karo. Bogga internetka ee la isku halleyn karo waxaa lagu qiimeyn karaa PageRank iyo lambarka iyo tayada xiriirka ilaha kale ee tilmaamaya boggan. Intaa waxaa dheer, qoraallada caanka ah ee la midka ah waa inay noqdaan ciyaar isku xiran oo ku xiran bogga lala xiriirinayo. Xiriiro kale oo tilmaamaya boggan waa inay ka socdaan boggaga internetka ee sareeya. Xidhiidhyadani waa inay ka yimaadaan ilo kala duwan oo aan la bixin karin.
Sidaas darteed, haddii bogga ku xiran boggaaga ka dib dhammaan shuruudahaan Google, waxaad u badan tahay inaad ilaalinayso horumar weyn oo ah darajooyinka boggaaga. Hase yeeshee, waa inaadan si cad u daboolin shuruudaha soo socda. Ugu yaraan saddex ka mid ah ayaa ku filan. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad magdhaw ku dhejiso miisaan weyn oo weyn.